के नेपालमा चिनियाँ रेल कुद्ला ? यो प्रश्न यति बेला नेपाली जनमानसमा निकै तातेको छ। गतवर्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँका चिनियाँ समकक्षी ली छ्याङबीच नेपालमा रेलमार्ग निर्माणबारे प्रारम्भिक सहमति भएको थियो।
बेइजिङमा भएको यस समझदारीले नेपालमा रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्यका लागि बाटो खोलिदिएको छ।
यसका लागि आवश्यक पर्ने खर्चको पनि अनुमानित तथ्यांक आपसमा तय भएको छ। उक्त डीपीआर तयार भएपछि निर्माणको प्रक्रिया शुरू हुनेछ।
चीनकै योजनामा पनि सन् २०१९ को अन्त्यसम्म चीनको सिगात्सेसम्म रेल पुर्याइने बताइएको छ। नेपालमा रेल भित्रिँदा यसैलाई केरुङको बाटो काठमाडौं ल्याउने हालको सोच हो। नेपालको चीनसँगको सीमा रसुवागढीदेखि काठमाडौं करिब ८० किलोमिटर छ।
सम्भवतः डीपीआर निर्माण हुँदा यही मार्ग छान्ने सम्भावना धेरै रहन्छ। चिनियाँ पक्षको तयारी पनि यही रहेको देखिन्छ। नेपालमा आउने रेल कार्गो रेल रहने योजना चीनले अघि सारेको छ।
कार्गो रेलमा सामान र यात्रु दुवै राख्न मिल्छ। यस्तो रेलले नेपाललाई छुँदा मात्र हामीले भन्ने गरेको समृद्धि विपनामै प्राप्त हुनेछ।
किनभने हाम्रो उत्तरी छिमेकीको समृद्धिलाई अहिले ठूलो हिमालले छेकेको छ। उत्तरी छिमेकीको सम्पन्नताबाट हामी लाभान्वित हुन सबैभन्दा पहिलो सर्त र आधार भनेकै यातायात हो।
समुद्रसम्मै पहुँच नभएका हामीहरूको लागि अहिले हिमाल वारिपारि गर्न सहज, सरल र सस्तो बाटो चाहिएको छ। त्यो बाटो सकेसम्म रेलकै बन्यो भने लाभदायक हुनेछ।
रेल नेपाल भित्रिँदा चिनियाँ समृद्धि भने पक्कै भित्रिन्छ। हामी तेलदेखि सेलसम्म नै दक्षिणतर्फ निर्भर छौँ। हामी बाध्यतावश आश्रित हुनुपरेको फाइदा उनीहरूले उठाउने गरेको एउटा उदाहरण नाकाबन्दी हो।
त्यसैले वास्तवमै चीनबाट यहाँ रेल भित्रियो भने उत्तरको समृद्धि कुनै न कुनै रूपमा नेपाल भित्रिन्छ र यसले दक्षिणतर्फको परनिर्भरताको हद घटाउन सघाउँछ।
विश्वको करिब ६४ प्रतिशत जनसंख्या समेटेको एक्काइसौं शताब्दीको सबैभन्दा महत्वाकांक्षी मानिएको बीआरआई योजनाका कारण विश्वमा चीनको चासो र चर्चा बढी छ।
दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनले पछिल्लो सयममा गरेको आर्थिक र प्रविधिको विकास, रेलसेवा र अन्य पूर्वाधारमा मारेको लोभ लाग्दो फड्को हामीजस्ता छिमेकीका लागि फाइदै हो। चीनले गत जुन २६ मा प्रतिघन्टा कम्तीमा ३५० किलोमिटर गुड्ने बेइजिङ–सांघाई दू्रत गतिको रेलसेवा शुरू गर्यो।
ठूलो उपलब्धि मानिएको यो संसारकै सबैभन्दा तीव्र गतिको रेलमा पर्दछ। तर के उसले यो तीव्र गतिको रेलमा नेपाललाई पनि सवार गराउला त भन्ने अहिले नेपाली बजारमा तातेको छ। भदौमा चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपालमा उच्चस्तरीय भेटघाट गर्दै चीन नेपाललाई सहयोग गर्न चाहेको पनि बताए।
बैठकमा तीनवटा सम्झौता गर्दै रेल, पूर्वधार निर्माणलगायतका विषयमा सम्झौता नजिक पुगेको परराष्ट्र अधिकारीहरू बताउँछन्।
नेपाल इतिहासमै यतिखेर चीनसँग बढी नजिकिएको बुझिएको छ। राजनीतिक, आर्थिक या अन्य हिसाबले पनि यी दुई छिमेकीबीच पछिल्लो समयमा धेरै कुरा आदानप्रदान भएका छन्।
यो आदानप्रदानको मात्रा पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दो छ। चीनको बीआरआई आयोजनामा नेपालको सहभागिता पनि यसको सबैभन्दा ओजिलो उदाहरण हो।
चीनले नेपाललाई पनि आफ्नो समृद्धिको रेलमा सवार गराउन चाहेकै छ तर तानेर लाने होइन, रेल चढ्न आफैं सक्षम हुनुपर्छ।
नेपाल चीनको दक्षिण एसियामा गर्ने लगानीको लागि ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’ पनि हुन सक्छ। चिनियाँ रेल नेपाल आउँदा यहाँ मात्र बस्दैन शायद भारतसम्मै पुग्छ। भारत हुँदै अन्त पनि जान्छ। त्यतिखेर नेपाल दक्षिण एसियाको व्यापारिक केन्द्र पनि बन्न सक्छ।
त्यो रेल यहाँ आउँदा सवा सय करोडभन्दा बढी जनसंख्या रहेको देशका पर्यटक भित्रिन्छन्। त्यसैले अहिले सबै जनमानसमा यो प्रश्न गुन्जिएको छ।
के नेपालमा चिनियाँ रेल कुद्ला ? यो प्रश्नको उत्तरका लागि अहिले सरकारले आवश्यक नीति नियम बनाएर चीनसँग सम्झौता गर्न अत्यन्तै जरुरी छ।